MY WRITING | News, Art and Ideas For Burma
Filed under: MY WRITING — Nyo Gyi @ 7:07 pm
” အဓိက ကတော့ စနစ်ပဲ “
ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ မီဒီယာ၊ တပ်မတော်၊ ရဲ၊ NGO၊ ၀န်ထမ်း၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်း၊ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း…စသဖြင့်။
အဓိက ကတော့ စနစ်ပဲ။ စနစ် မသေချာရင် အချစ်ဆိုတာမှာတောင် ‘အတု’ ပဲ သင်တို့ရရှိလိမ့်မယ်။
Filed under: MY WRITING — Nyo Gyi @ 4:32 pm
“ခင်ဗျားတို့ = လူလည်မသားများ”
(သူကအသက်ကြီးနေပြီလေ။ သူအသက်သေသည်အထိ ဗမာပြည်ကို လုံးဝမကယ်နိုင်အောင် ခင်ဗျားတို့လုပ်ထားဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတာမဟုတ်လား)
(သူ ဗမြန်မာပြည်ကို မကယ်နိုင်အောင် ခင်ဗျားတို့ ဆက်ပြီး ကြံကြဦးမယ်မဟုတ်လား)
သန်း ၅ဝ (ခု သန်း ၆ဝ မကသော) ဗမြန်မာပြည်သူတွေအတွက် အလုပ်လုပ်မယ့်သူေ
တွ တစ်ပုံကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာ အာဏာရှင်(အာဏာသေ)တွေ သဘောပေါက်သင့်တယ်။
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင် ပြီးရောဆိုသူတွေရှိသလို
ဘယ်သူရှင်ရှင် ကိုယ်မမာရင် ပြီးရောဆိုသူတွေလည်း အပုံကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။
သူ့အလိုလိုလည်း (ရွေးတတ်) တွေးတတ်တယ်ဆိုတာ
Jade War in Burma (Myanmar)
Filed under: MY WRITING, Peace — Nyo Gyi @ 8:18 pm
အဖေပြောတဲ့ စကားကို သဘောကျမိတယ်။ တကယ်တော့ ကချင်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲဆိုတာ တကယ်တော့ ” ကျောက်စိမ်း ” စစ်ပွဲ ပဲတဲ့။
>Do Thein Sein Forget His Real Father?
Filed under: DAYS TOPICS, MY WRITING, PHOTOS — Nyo Gyi @ 1:00 am
>အဖေမေ့ပြီး ပထွေးကို ဂါရ၀ပြုတဲ့ သိန်းစိန်
“ကိုမောင်အေး တစ်ယောက် အဖေကျော်ပြီး ပထွေးကိုလွမ်းခြင်း” Ko Maung Aye Forgot His Real Father?
>Bad News For Buddha’s Sons and Daughters of Muse District
Filed under: MY NEWS, MY WRITING, PHOTOS — Nyo Gyi @ 12:30 pm
Filed under:ို, MY WRITING, NARGIS CYCLONE, PHOTOS — Nyo Gyi @ 11:15 am